Bit By Bit - Isingeniso - 1.4.2 Ilula phezu yinkimbinkimbi
Ucwaningo Complex Ayisoze ukukholisa ubani isimanga. Uma unendaba ekushintsheni izingqondo, khona-ke ucwaningo lwakho kufanele elula.
ucwaningo Social in the age digital ngokuvamile uhlanganiswa yinkimbinkimbi, ezifana ubuchule fancy kanye ne-computing eyindida. Kuyadabukisa lokhu ngoba ucwaningo ekholisa kunazo yezenhlalakahle ngokuvamile kulula. Ukuze kucace, ucwaningo elula akufani njengoba ucwaningo lula. Empeleni, ngokuvamile kunzima kakhulu ukuba adale ucwaningo elula.
Isizathu esibaluleke kunazo zonke sokuba bakhetha ucwaningo elula ukuthi kuyindlela nje ukwakha kukholakale, imiphumela ezingalindelekile. Ngokwesibonelo, ake sithi baqhuba uphenyo nje usebenzisa i indlela yokusebenza emangalisayo eyinkimbinkimbi. Uma imiphumela yakho iyavumelana nokulindela wakho, khona-ke cishe sizamukele. Kodwa, uma imiphumela yakho ihlukile kulokho owawukucabanga, une ezimbili okufanele akhethe kuzo: ukwamukela imiphumela ezingalindelekile noma singabaze indlela eyinkimbinkimbi. Ukuqagela wami wukuthi wena cishe ukungabaza indlela yokusebenza ebudisi khulu. Lokhu kwenza umqondo ophelele, kodwa kusho ukuthi eziyinkimbinkimbi ngokwengeziwe indlela, cishe kancane kangakanani ukuba nemiphumela engalindelekile ukuthi empeleni nikholwe. Esikhathini esithile, izindlela okungenza ngibe eliyinkimbinkimbi kangangokuba imiphumela kuphela ukuthi ungakwethemba lokho yilawo ehambelana nawe okulindelwe. Ngaleso sikhathi, ucwaningo luye abalahlekelwe okuthile okubaluleke kakhulu: ucwaningo kufanele bakwazi ukushintsha ingqondo yakho.
Inkinga ukuthi ngiye sachaza uhlale kakhulu uma uqala uzama ukushintsha ingqondo yomunye. Cabanga nje ethula i piece emangalisayo eyinkimbinkimbi yocwaningo ukuthi ine yi esingalindelekile omunye umuntu. Lokho omunye umuntu ophila engazange wachitha izinyanga ubhala ikhodi yakho bese usebenza ngokusebenzisa idatha yakho ukuze lapho zibhekene ne choice yokwamukela Chile ezingalindelekile noma ukungabaza indlela eyinkimbinkimbi, basuke pheze izakuhluleka sokungabaza indlela eyinkimbinkimbi. Uma unendaba obukholisayo omunye umuntu ukuba bashintshe ukucabanga kwabo, khona-ke ucwaningo yakho idinga ukuba elula.
ucwaningo Simple livela kufanelekile wemvelo phakathi umbuzo kanye nedatha; ngamanye amazwi, kuhle design ucwaningo. Nokho, Poor zocwaningo design, kuholela yinkimbinkimbi ugly ezilethwa esisuka idatha yakho embuzweni okuyiwona abawona kahle. Le ncwadi ligxile tindlelanchubo ezimbili ukudala ukulingana kwemvelo phakathi umbuzo kanye nedatha. Okokuqala, le ncwadi izokusiza wena ukubuza imibuzo enengqondo idatha yakho. Okwesibili, le ncwadi izokusiza wena ukuqoqa idatha ilungelo ukuphendula umbuzo wakho.